राजश्व उठाउन ओली सरकार असफल, के प्रभाव पर्ला अर्थतन्त्रमा ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
राजश्व उठाउन ओली सरकार असफल, के प्रभाव पर्ला अर्थतन्त्रमा ?
साउन १, २०७६ | आजको अर्थ
काठमाडौ – गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । असार ३१ गते मंगलबारसम्म सरकारले रु ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।
गत वर्ष सरकारले रु ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य अनुसार रु १ खर्ब ३५ अर्ब उठाउन सरकार असफल भएको हो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क लक्ष्यअनुसार असुली नभएपछि यसको असर समग्र राजश्व परिचालनमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रु ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार नउठ्ने भएपछि ६ महिनाको मध्यवाधि मूल्याँकनमा राजश्व लक्ष्य घटाएर रु ९ खर्ब १७ अर्ब मा झारिएको थियो । यो लक्ष्य पनि पुरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ८ खर्ब ६० अर्ब संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।
पछिल्लो लक्ष्य पनि भेट्टाउन सरकार असफल भएको हो । पछिल्लो अनुमान भन्दा २५ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । गत वर्षको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि रु ९ खर्ब ८० अर्ब राजश्व परिचालको लक्ष्य पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रु १ खर्ब ९० अर्ब आयकर उठेको छ । गत वर्ष रु २ खर्ब ९ अर्ब ६८ करोड आयकर उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । राजश्व लक्ष्य पुरा नहुनुमा आयकरको भुमिका महत्वपुर्ण देखिएको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली समेत कम भएको छ । सरकारले रु २ खर्ब ५० अर्ब भ्याट असुलीको लक्ष्य राखेकोमा रु २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै उठेको छ ।
सरकारले मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिबाट झण्डै रु ४० अर्ब लाभकर असुल गर्न सकेन । यस्तै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट पनि साढे ४ अर्ब भन्दा बढी वक्यौता असुल भएन । एनसेलको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजश्वको थप स्रोत सिर्जना हुन सकेन । सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेको भए आयकर, भ्याटलगायत राजश्व उठ्ने थियो । यसले पनि राजश्व संकलनमा असर गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा रु ७ खर्ब २८ अर्ब मात्र असुली भएको थियो । वेरुजु असुलीलाई पनि राजश्वमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले रु ७ खर्ब ३२ अर्ब असुली भएको देखाएको थियो । राजश्व संकलन २० देखि २२ प्रतिशत हारहारीम बढ्ने गरेको छ ।
बढ्दै प्रहरीको ज्यादतीः सागको अन्तिम दिन रंगशाला भित्रै प्रहरीद्धारा कुटिए पत्रकार
साना तथा मझौता व्यवसाय गर्न सिदार्थ बैंकबाट ७५ लाखसम्म्म ऋण पाइने
एम्बुलेन्स किन्नुपर्नेमा डोजर किन्छन स्थानीय तह
मुख्य समाचार मंसिर २३, २०७६